Haddii adiga ama qof aad taqaan ama la shaqeyso ay ka faa'ideysan karaan adeegyada WIC, fadlan la xiriir xarunta caafimaadka ee kuugu dhow ama wac ITCN WIC at (775) 398-4960.
Waxaad ka heli kartaa xarunta caafimaadka WIC ee kuugu dhow ee app!
Hubi inaad ogtahay miisaankaaga cuntada ee WIC adigoo isticmaalaya liiska Dakhliga ee hadda ama risiidhka ugu dambeeyey.
Ku duub qalabkaaga WIC, ka dibna waxaad tagtaa laynka banaan. Fiiri calaamadda sheegaysa "WIC Accepted Here" ee haadka ama haddii aad ku jirto mid ka mid ah dukaamada lagu tilmaamay "WIC At Lane" waxaad ka hubin kartaa haad kasta.
Kala sooc waxyaabo aad u qalantid WIC-kaaga cuntadaada kale.
U sheeg ka-shaqeeyaha in aad isticmaali doonto kaarkaaga Nevada WIC EBT Card oo waxaad siisaa tigidhada dukaanka ama wax soo saarka.
Xulo "Badeeco WIC" oo ku taal terminal-ka-iibka (POS), ka dibna ku dheji kaarkaaga Nevada WIC EBT Card.
Ku qor lambarkaaga afarta lambar ee digriiga ah oo riix 'Enter'.
Qofka dukaanka ayaa baaraya walax kasta si uu u xaqiijiyo in uu yahay shey cunto WIC ah oo la ansixiyey.
Khasnajigu wuxuu geli doonaa xaddiga rasiidhadaada, wuxuu isu geynayaa dhammaan cuntooyinka WIC oo wuxuu ku siinayaa rasiid WIC EBT. Rasiidkaagu wuxuu muujinayaa dheelitirka lacagta gunnada.
Hubi inaad haysatid kaarkaaga Nevada WIC EBT iyo rasiidka marka aad ka baxayso dukaanka.
Riix hoose si aad u aragto liiska cuntada ee ITCA WIC.
Ballamaha - Maxaa loo baahan yahay?
Waqtiga ballantaada, codsade kasta wuxuu u baahan doonaa inuu yeesho
Caddeynta Degenaanshaha, iyo
Waxaa lagaa codsan doonaa inaad soo qaadato mid ka mid ah waxyaabaha soo socda si aad ballantaada WIC u hesho
(laakiin aan ku xaddidneyn):
Waa inuu ahaadaa dukumiinti asal ah / aan rasmi ahayn (sawir la'aan)
Dhallaanka / Carruurta
Diiwaanka Dhalashada Isbitaalka
Dumarka ama Dadka Waaweyn (waalidka, wakiilka, ama wakiilka)
Aqoonsi sawir leh (sida shatiga wadista, baasaboorka)
Shaqada ama Aqoonsiga Iskuulka
Caddeynta degenaanshaha waxaa loo isticmaali karaa in lagu caddeeyo qoyska oo idil. Caddeynta waalidka / mas'uulka degenaanshuhu wuxuu khuseeyaa ilmaha / ilmaha (magaca ma aha inuu ka muuqdo dukumeentiga la isticmaalo).
Kuwa soo socda ayaa ah foomamka dukumeentiga ee degenaanshaha:
Biilasha tamarta ee guriga ee la soo sheegay
Kirada ama risiidhada deynka ee guryaha / guryaha
Xaaladda liisan darawalnimada ee Nevada ama aqoonsiga gobolka oo leh cinwaanka jirka ee hadda jira
Cinwaanka PO Box ma aqbali karo caddaynta deganaanshaha
Soo qaado dukumiinti dhammaan dakhliga ay heleen xubnaha qoyska
Dakhliga waxaa lagu qeexayaa dhammaan dakhliga guud kahor inta aan laga jarin canshuurta dakhliga, canshuurta soshal sekuuritiga, caymiska caymiska, masruufka caruurta, lacag bixinta baabuurta, iwm. Dhamaan dakhliyada laga bilaabo maalmaha 30 ee hore ayaa loo tixgelin doonaa, sida:
Mushaharka, mushaharka, qandaraasyada, ama khidmadaha
Dakhliga saafiga ah ee ka soo jeeda beeraha iyo beeraha aan beeraha ahayn
Macaashka Lambarka Bulshada
Qaybsashada ama dulsaar ku saabsan keydinta ama curaarta
Dakhliga ka soo gala hantida ama maalgelinta, maalgelinta ama dakhliga saafiga ah ee kirada
Kaalmada bulshada ama lacag bixinta cayrta
Dawladda, shaqaalaha rayidka ah ama hawlgab milatari ama hawlgab ama lacag mushaara ah
Lacagaha hawlgabka gaarka loo leeyahay ama gunooyinka ama caymiska caymiska
Masruufka ama masruufka caruurta
Kharashka joogtada ah ee dadka aan ku nooleyn guriga
Lacagta saafiga ah
Dakhliga kale waxaa ka mid ah, laakiin aan ku xaddidneyn, lacagta caddaanka ah ee la helay ama laga soo bixiyay ilo kasta oo ay ka mid yihiin keydinta, maalgashiyada, xisaabaadka kalsoonida iyo ilo kale oo la heli karo oo la heli karo qoyska
Sideen ku heli karaa faa'iidooyinka cuntada ee WIC kaarka Kaarka WIC EBT?
Kaarkaaga Nevada ee WIC EBT wuxuu qabtaa dhammaan faa'idooyinka qoyska oo idil. Rugta WIC, waxaad ka heli doontaa liiska gargaarka cuntada WIC ee qoyskaaga bilaha hadda iyo laba bilood ee soo socda.
Kiliinigaaga WIC wuxuu mas'uul ka yahay inuu kuu qoro cuntooyinkaaga oo uu kugula galo nidaamkaaga. Waxaad heli doontaa mid ka mid ah Nevada WIC EBT Card kaas oo haya dhammaan faa'iidooyinka qoyskaaga oo idil. Waxaad ka heli doontaa liiska wax iibsiga ee rugtaada caafimaad oo ku tusaya dhamaan faa'iidooyinka laga heli karo kaarkaaga.
Sidee baan ku ogaanayaa miisaankayga gargaarka cuntada ee WIC (liiska wax iibsiga)?
Waxaa jira afar siyaabood oo lagu heli karo dheelitirkaaga:
Barnaamijka moobilka ee WICShopper
Had iyo jeer hayso risiidhkaaga ugu dambeeyey maxaa yeelay taasi waxay muujinaysaa hadhaaga haray.
Wac lambarka bilaashka ah 1-877-234-7056 iyo raac tilmaamaha.
Tag khadka tashiilka ee dukaanka raashinka oo samee baaritaanka dheelitirka.
Maxaa dhacaya haddii aan doonayo inaan baddalo gargaarka cuntada ee WIC?
Waxaad u baahan doontaa inaad la xiriirto shaqaalaha WIC-gaaga si aad ugala hadashid wixii isbedel ah ee suurtagalka ah ee faa'iidooyinkaaga cuntada.
Ka waran haddii aan qorsheynayo inaan guurto ama bedelo cinwaankayga?
Waa inaad la xiriirtaa shaqaalaha WIC. Had iyo jeer iska hubso in cinwaankaagu sax yahay sidan sidaad u heli lahayd kaarkaaga bedelka haddii kaarkaaga lumo ama la xado.
PIN waa lambarka qarsoodiga ah oo afar lambar ah oo kuu ogolaanaya inaad isticmaasho nevada WIC EBT Kaarka dukaanka. Kaadhkaaga ma shaqeynayo ilaa aad ka doorato PIN-kaaga. Waxaad dooran doontaa lambarkaaga PIN markaad hesho kaarkaaga ugu horreeya ee Nevada WIC EBT. Dooro afar lambar oo aad u sahlan inaad xasuusato, laakiin aad u adag tahay qof kale inuu ogaado.
Marna ha u sheegin PIN-kaaga cidna! Ha ku qorin PIN-kaaga kaarkaaga Nevada WIC EBT. Haddii qof uu yaqaanno lambarkaaga PIN, waxay isticmaali karaan kaarkaaga si aad u hesho faa'iidooyinkaaga munaasabaddana lagama beddeli doono.
Maxaa dhacaya haddii aan illoobo lambarkayga PIN, rabto PIN cusub ama qof ayaa hela lambarkayga PIN?
Wac Adeegga Macaamiisha 1-877-234-7056 inuu doorto PIN cusub.
Haddii aadan xasuusan karin lambarkaaga PIN, waxaad wacdaa Adeegga Macaamiisha 1-877-234-7056 inuu doorto PIN cusub. Haddii aad gasho PIN qaldan, waxaad heli doontaa seddex fursadood oo dheeraad ah si aad u gashid lambarka saxda ah. Kadib tijaabadii afaraad, ma awoodi doontid inaad isticmaasho kaarkaaga illaa 12: 01 maalinta xigta.
Haddii kaarkaaga uu kaa lumo ama la xado, si degdeg ah u soo sheeg adigoo wacaya Adeegga Macaamiisha. Mar walba wac daqiiqada aad ogaato kaarkaaga ka maqan. Waa inaad sugto maalmaha shaqada 5-7 si aad u hesho kaarkaaga bedelka boostada.
Sideen u daryeeli karaa kaarkayga WIC EBT?
Marna cidna u sheegin Lambarka Aqoonsiga Shakhsiyeed (PIN).
Magacaaga ku qor magaca dambe ee kaadhkaaga.
Kaarkaaga xafid nadiif, ammaan iyo meel ka baxsan meelaha kulul, sida qorraxda tooska ah iyo WAXAA leexin.
Kaarkaaga ka fogee qalab elektaroonik ah, sida TV-yada, raadiyaha, VCR's, microwaves, iwm. Ka ilaali magnets iyo kaadhadhka kale ee jimicsiga (ie, credit card ama debit cards).
Maxaa dhacaya haddii aan ubaahano qof kale si aan u daawado WIC?
Haddii aad rabto qof kale inuu kuu dukaamaysto, la xiriir Shaqaalaha WIC Shaqaalaha WIC waxaadna waydiisaa inaad ku darto Wakiil.
Maxaa dhacaya haddii qalabka WIC EBT ee dukaanka uusan shaqayn?
Waxaad ku laaban kartaa goobtii dukaanka ka dib wakhti dambe AMA waxaad tagi kartaa dukaamo kale oo WIC ah oo la aqbalay si loo dukaamo.
Maxaa dhacaya haddii mid ka mid ah cuntooyinka WIC aan baaritaan ku sameynin ama haddii aan haysto "Balance Balanced?"
Haddii nidaamka WIC EBT ee dukaanka uusan u oggolaanin sheyga cuntada ee WIC-ansixinta iibsashadaada WIC, sheyga laguma dari karo liiska cuntooyinka WIC-ansaxiyey ee dukaankaas.
Haddii dukaanka lacagtu sheegeyso inaad haysato "Balance Balanced" mid ka mid ah qaybaha cuntada ee WIC, dib u eegis ku samee dheelitirkaaga. Uma isticmaali kartid kaarkaaga Nevada WIC EBT si aad ugu iibsato waxyaabo badan oo ka badan inta lagaa rabo inaad ogaato.
Maxaan sameeyaa haddii waxtarrada laga soo qaatay kaararkayga anigana ma helin cuntooyinka dukaanka?
Haddii aad u maleyneyso in dukaanku sameeyey qalad ah WAA inaad wacdo Adeegga Macaamiisha sida ugu dhakhsaha badan aad uga warqabto qaladka. Ma dukaanka iyo WIC Clinics ma awoodaan inay kuugu soo celiyaan alaabtaada Nevada WIC EBT Card. Waa inaad wacdaa Adeegga Macaamiisha si aad u gudbiso dalab.
Goorma ayaan wacaa Adeegga Macaamiisha?
Haddii kaarkaagu uu waxyeello u geystey ama uusan shaqaynayn.
Haddii aadan xasuusan karin lambarkaaga PIN ama aad rabto inaad beddesho lambarkaaga PIN.
Haddii aad qabtid su'aalo ama aad u baahan tahay caawimo kaarkaaga.
Si aad u gudbiso dalab